အသံဖိုင်များ – DhammaYoungChi
Home » Blog Page » တရားတော်များ » အသံဖိုင်များ
This entry was posted in တရားတော်များ အသံဖိုင်များ on May 11, 2013 by DhammaYoungChi
၀၀၁ – ငါတို့ဘုရား ၀၀၂ – ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်(၉)ပါး ၀၀၃ – ဓမ္မဂုဏ်တော်(၆)ပါး ၀၀၄ – သံဃာ့ဂုဏ်တော်(၉)ပါး ၀၀၅ – သရဏဂုံကဗျာ (၁) ၀၀၆ – သရဏဂုံအကျိုး(၁၀)ပါး ၀၀၇ – သရဏဂုံ(၃)ပါး ၀၀၈ – လိမ္မာတဲ့ကလေး ၀၀၉ – လက်ဆေးရန်ကဗျာ ၀၁၀ – မောင်ညစ်ပတ် ၀၁၁ – သူတော်ကောင်းကဗျာ ၀၁၂ – တေးကဗျာ ၀၁၃ – ပန်းတော်ကပ်၊ ရေတော်ကပ်၊ ဆီမီးတော်ကပ်၊ ဆွမ်းတော်ကပ် ၀၁၄
This entry was posted in တရားတော်များ အသံဖိုင်များ on February 16, 2013 by DhammaYoungChi
ကျေးဇူးတော်ရှင် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သစ္စာလေးပါးတရားတော်များ ၁။ ရှစ်ပါးသီလပေး ၂။ ဒိဋ္ဌိသတ်လျှင် သောတပန်တည်သည် တရားတော် (၁၉.၁.၆၀) ၃။ ကံသည် အနတ္တသဘောဖြစ်ပုံ၊ မဟာပုဏ္ဏမသုတ် (၂၀.၁.၆၀) ၄။ လူမိုက်နှင့် လူမိုက်ထက်ပိုမိုက်သော သူတရားတော်(၂၁.၁.၆၀) ၅။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းနှင့် အကျိုးတရားနာနေကြပုံ (၂၂.၁.၆၀) ၆။ မဂ္ဂဗြဟ္မစရိယ အကျင့်နှင့် လူမိုက်လမ်းဖြတ်ရန် (၂၃.၁.၆၀) ၇။ လူမိုက်နှင့် လူလိမ္မာခွဲခြားပုံတရားတော် (၂၄.၁.၆၀) ၈။ ငါဟူသော သက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရန်၊ ရှင်ခေမကဥပမာပြ(၂၅.၁.၆၀) ၉။ အနိစ္စနှင့် အနိစ္စလက္ခဏာ၊ ရှင်ခေမာပြ(၂၆.၁.၆၀) ၁၀။ အိပ်ခြင်းမှ နိုးပြီး မဂ္ဂင်ဖောင်ပြကြရန် တရားတော် (၂၇.၁.၆၀) ၁၁။ ၀ိပဿနာလမ်းနှင့် နိဗ္ဗာန်သွားနိုင်ပုံ တရားတော် (၂၈.၁.၆၀) ၁၂။ သုသိမပရဗိုဇ် တရားခိုးခန်း တရားတော် (၁) (၂၉.၁.၆၀) ၁၃။ သုသိမပရဗိုဇ် တရားခိုးခန်း တရားတော် […]
This entry was posted in တရားတော်များ အသံဖိုင်များ on January 28, 2013 by DhammaYoungChi
ကျိုက္ကလော့ဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်စန္ဒာဝရာဘိဝံသ မိုးကုတ်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပြန့်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်၌ (၆-၁၀-၂၀၁၂) မှ (၁၅-၁၀-၂၀၁၂) နေ့တွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်များ 1.6– 10 – 2012 AM 2.6– 10 – 2012 PM 3.7– 10 – 2012 AM 4.7– 10 – 2012 PM 5. 8 – 10 – 2012 AM 6. 8 – 10 – […]
This entry was posted in တရားတော်များ အသံဖိုင်များ on January 22, 2013 by DhammaYoungChi
အရှင်ပညာသီဟာဘိဝံသ ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်များ ၁။ ကောင်းဖို့ ပြောင်းရအောင် (၂၄.၄.၀၈) ၂။ တရားဦးဓမ္မစကြာင်္ အပိုင်း (၁) (၁၇.၇.၀၈) ၃။ တရားဦးဓမ္မစကြာင်္ အပိုင်း (၂) (၁၈.၇.၀၈) ၄။ တရားဦးဓမ္မစကြာင်္ အပိုင်း (၃) (၁၉.၇.၀၈) ၅။ တရားဦးဓမ္မစကြာင်္ အပိုင်း (၄) (၂၀.၇.၀၈) ၆။ တရားဦးဓမ္မစကြာင်္ အပိုင်း (၅) (၂၁.၇.၀၈) ၇။ တရားဦးဓမ္မစကြာင်္ အပိုင်း (၆) (၂၂.၇.၀၈) ၈။ တရားဦးဓမ္မစကြာင်္ အပိုင်း (၇) (၂၃.၇.၀၈) ၉။ တရားဦးဓမ္မစကြာင်္ အပိုင်း (၈) (၂၄.၇.၀၈) ၁၀။ တရားဦးဓမ္မစကြာင်္ အပိုင်း (၉) (၂၅.၇.၀၈)
This entry was posted in အသံဖိုင်များ on January 2, 2013 by DhammaYoungChi
အရှင်ဃောသိတ (တစ်ဘ၀သာသနာကျမ်းပြု) ဖိုင် ( ၁ ) ၁။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် အခြေခံတရား ၂။ ရှည်လျားတဲ့ဘ၀သံသရာ ၃။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နှင့် ကမ္မဘ၀ရှင်းတမ်း ၄။ အတိတ်ကံအစွမ်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ ၅။ ရုပ်နာမ်ခွဲ ပညတ်ပရမတ်ခွဲ ၆။ တဏှာသင်္ခယသုတ် ၇။ (၆၂)ပါးသော မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ၈။ ဆပ္ပါဏကောပမသုတ် (သားကောင်၆ကောင်ဥပမာပြ) ၉။ သုညတဆိုက်အောင်ရှုပါ ၁၀။ တေ၀ိဇ္ဇသုတ် ၁၁။ ဖဂ္ဂုနရဟန်းတရား ၁၂။ ဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ် ၁၃။ သမ္မာဒိဋ္ဌိ (၅)မျိုး ၁၄။ အဂ္ဂိ၀စ္ဆသုတ် ဖိုင် ( ၂ ) ၁။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် အခြေခံတရား ၂။ အတိတ်ကံအစွမ်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ ၃။ ဓါတ်ကြီး (၄၂)ပါးမျှသာ ၄။ […]